Ugwetshwe iminyaka engu-22 umgulukudu owabulala ababili | News24
Ugwetshwe iminyaka engu-22 umgulukudu owabulala ababili
Cape Town – Isigebengu esaziwayo eManenberg sigwetshwe iminyaka engu-22 sibhadla ejele ngamacala ahlanganisa nawokubulala, kusho amaphoyisa aseWestern Cape ngoLwesihlanu.
U-Alfonso Seconds ugwetshwe ngoLwesine ngecala lokubulala abafana ababili ngo-2015 nango-2016.
Uphinde walahlwa yicala lokuzama ukubulala, ukutholakala nesibhamu esingekho emthethweni kanye nezinhlamvu, nangecala ngaphansi kwe-Prevention of Organised Crime Act elimayelana nezenzo zakhe ngaphansi kweqmbu lemigulukudu, kusho okhulumela amaphoyisa uNoloyiso Rwexana.
OLUNYE UDABA: UMengameli nomyalezo entsheni yakuleli
“Ithimba yabaseshi bamacala abucayi eManenberg, eliphenya ngamacala ahlanganisa ukubulala, izenzo zamaqembu emigulukudu, liphumelele ukusebenzisa i-Prevention of Organised Crime Act (POCA) ophenyweni lwalo,” kusho uRwexana.
“Ithimba lisebenze ngokuzikhandla ukutholela imindeni iqiniso ukuze lolu daba ludlule.”